အကြင်နာနန်းတော်: အကောင့် disable ဖြစ်သွားလျှင်
6 Nov 11, 01:37 PM
Aung Nay Oo: gmail အကောင့် က disible ဖြစ်သွါးတဲ့ အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရင် ပြန်ပြီး ရနိုင်မလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ် အကောင့်က အရေးကြီး အကောင့်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ပါdisible ဖြစ်သွားတဲ့ အကောင့်နာမည်က prittyzin.zin8@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်
ကိုအောင်နေဦး ရဲ့ အကောင့် disable ဖြစ်သွားတာကို အောက်က နည်းလေးအတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်..
ကိုယ့်ဖွင့်လိုက်တဲ့ gamil အကောင်မှာ ဖုန်းနံပါတ်တွေ text mess တွေတောင်းနေမယ်..ပြီးတော့Gmail Account is Disabled ဆိုတာကြီးပေါ်လာတာက မေးလ်ကိုဖွင့်တဲ့အချိန် website ကျော်ကြည့်မိတာတွေနဲ့
သုံးရင်နဲ့ တခုခုမှားနှိပ်မိတာတို့.. လင့်တွေကနေတဆင့် မှားပီးဖျက်မိတာတို့တွေကြောင့် အကောင့် disable ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ် Gmail ကိုဝင်လိုက်လို့ error တက်နေမယ်
ဒါဆိုရင်တော့ Trouble shooting options ဆိုတဲ့လင့်ကိုနှိပ်သွားလိုက်ပါ……
ရောက်သွားရင်အောက်ကပုံလေးထဲကလိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီမှာ I know my username and password but I can’t sign in. ဆိုတဲ့ကိုရွေးပေးပါ..
နောက်တဆင့်ရောက်ရင် I am getting error ဆိုတာကို ရွေးပေးပါ..
ပြီးရင်တော့ Sorry, your account is disabled. ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ
Help article ဆိုတဲ့လင့်ကိုသွားလိုက်ပါ
If you believe your account was disabled in error, contact up.
ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးက contact up ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း လိုအပ်တာကိုဖြည့်ပီးရင် Submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
24 နာရီကြာရင် အဲဒီအကောင့်ကိုပြန်ဖွင့်လို့ရသွားမှာပါ။
ဒီနည်းလေးကို စိုင်းနက်ရှိင်း မှတ်စုစာအုပ်ကနေရတာပါ..အဆင်ပြေပါစေရှင်...
ပို့စ်ရေးသားသူ ဧကရီ ရက်စွဲ Saturday, November 12, 2011